यसरी छाड्न सकिन्छ धूमपान ? धूमपान तथा सूर्ती सेवन छाड्ने दिनमा गर्नुपर्ने १० कुरा::News from Nepal
यसरी छाड्न सकिन्छ धूमपान ? धूमपान तथा सूर्ती सेवन छाड्ने दिनमा गर्नुपर्ने १० कुरा
काठमाडौं – धूमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि धरै मानिसले यसको लत छाड्न सक्दैनन्। धूमपान त्याग गरेमा हृदयाघात, रक्तनलीसम्बन्धी समस्या, क्यान्सर तथा मष्तिष्काघातबाट मृत्यु हुने जोखिम कम हुन्छ । धूमपान छाड्न चिकित्सकसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा साथी तथा सहकर्मीबाट सहायता या प्रोत्साहन लिन सकिन्छ । धूमपान सेवन त्याग गरेपछि हुने तनावबाट कसरी मूक्त हुने भन्नेबारे औषधि तथा अन्य साधनाका बारेमा पनि चिकित्सकबाट सहयोग लिन सक्नुहुन्छ।